Times24 Nepal » पत्रकारलाई थर्काउदै प्रश्नको जवाफ नदिइ माइक फाल्दै हिँडे उपप्रधानमन्त्री यादव
पत्रकारलाई थर्काउदै प्रश्नको जवाफ नदिइ माइक फाल्दै हिँडे उपप्रधानमन्त्री यादव
काठमाडौँ नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालका दुई अध्यक्ष मध्येका एक उपेन्द्र यादव एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको बिचमै उठेर बाहिरिएका छन् ।एभी न्युज टेलिभिजनको सकस राजनीति कार्यक्रममा पाहुनाका रुपमा पुगेका उपप्रधान मन्त्री समेत रहेका यादवले कार्यक्रम सञ्चालक पत्रकारको प्रश्नको जवाफ नदिइ माइक फुकालेर बिचमै अन्तर्वार्ता छोडेर हिँडेका हुन् ।
यादवको संघीय समाजवादी फोरम र डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीबिच हालै एकता भएर डा. भट्टराई र यादव अध्यक्ष रहने गरि समाजवादी पार्टी नेपालको गठन भएको हो ।
अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारले नयाँ पार्टीको गठनको शुभकामनासँगै यो पार्टीले जनतालाई के दिन्छ ? भनेर प्रश्न गरे। त्यसको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, मिडियाले के दिन्छ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे।
पत्रकारले नम्र भएर हामीले त जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छौँ’ भनेर जवाफ दिए ।त्यसपछि नवगठित पार्टीका अध्यक्ष यादवले तपाईँलाई त प्रश्न गर्ने ढंग पनि दिएको छैन’ भन्ने जवाफ फर्काए । यादवले शिष्ट भएर प्रश्न गर्न, कसरी कुरा गरिन्छ भन्ने जान्न भने र विवाद लम्बिँदै गएपछि उनी माइक निकालेर हुयाउँदै अन्तर्वार्ताबाटै बाहिरिएका हुन् ।
प्रकाशित मिति ३० बैशाख २०७६, सोमबार ०४:३९